रुकुम घटनामा मा’रिएका नववराज बिकको घर पुगेर बन मन्त्रीले पुरानो घाउ को’ट्या’ए, न्याय चै कहिले दिने सरकार? – PathivaraOnline
Home > समाचार > रुकुम घटनामा मा’रिएका नववराज बिकको घर पुगेर बन मन्त्रीले पुरानो घाउ को’ट्या’ए, न्याय चै कहिले दिने सरकार?
admin October 4, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाण्डौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले रुकुमको सोती घटनाका पी’डित परिवारसँग आइतबार भेटघाट गरेका छन् । उनले त्यस समयमा पी’डित परिवारलाई सरकारले राहत दिने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । तर नवराज र उनका साथीहरुलाई के सजाय हुने बारेमा बस्नेतले थप कुरा भने गरेनन् ।
यो घटना ४ महिना अघिको हो जतिबेला तीन वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक र पश्चिमरुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीकी १७ वर्षीया मल्ल थरकी युवतीकहाँ पुगेका थिए । नवराज र उनका १९ जना साथी बाटोमा हौसिँदै गएको बताउँछन् । तर जब युवा सोती पुगे, माहोल एकाएक बिग्रियो ।
दलित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको ‘जात’ नमिले पनि उनीहरु विवाह ब’न्धनमा बाँधिन चाहन्थे । तर, नवराजका आमाबाबालाई भने अन्तरजातीय विवाह मन परेको थिएन । छोराले ढिपी गरेपछि हुन्छ भन्ने मुडमा आफूहरु पुगेको अभिभावक बताउँछन् । त्यसैले नवराज त्यस दिन आफ्ना साथीहरुलाई लिएर दुलही ल्याउन सोती गएका थिए ।
पटक–पटक मानसिकरूपमा त ना व र शारीरिकरूपमा कु ट पि ट व्यहोरोका नवराजलाई शनिबार ठूलो सङ्ख्यामा साथी लिएर आउनु भनी युवतीले सल्लाह दिएका कारण सोहीअनुसार १९ साथी लिएर सोती गएका थिए । जब उनीहरु घर नजिकै पुग्दा युवतीभन्दा, युवतीकी आमाको नजर युवामा प¥यो ।
त्यसपछि उहाँले “जति पि टा इ खाए पनि केही लागेन है, फेरि आइस् आज त मा रे र फा’लिन्छ” भन्दै गाउँका मानिसलाई बोलाएपछि त्यो घटना भएको थियो । त्यहाँ नवराज र उनका साथीहरुको ज्यान लिइएको थियो ।
फेरि दाङमा एक प्रह,री ज,बान को दुखद मृ,त्यु
अचम्मित पार्ने पाकिस्तानी चोर जोडी : जो नेपालमा आएर गरे अनौठो चोरी धन्दा (पूरा हेरि शेयर गरौ )